Ukufunda: i-intanethi ngokwayo ingaba ngumlutha | Umvuzo weZiseko
Ikhaya nokufunda Izidakamizwa zeInternet
Ngaba uyazi umntu ofumene nzima ukugxila kunoma yini enye ngaphandle kwe-intanethi? Ngaba bachitha ixesha elide belibukele? Ngaba ziyacaphukisa xa ezinye izinto zibafudusa kuyo?
inye wengqondo Utsho malunga ne-80% yolutsha esichengayo ayinayo imeko yezempilo yengqondo eyaziwa ngayo kwaye iimpawu kunye neempawu zabo zicaca emva kweveki yeeveki ezintathu ngokukhawuleza. Ezi meko ziquka ukucindezeleka, ADD / ADD ukuziphatha kunye nengxaki yokuguquka kwengqondo. Kuphela ngokususa i-intanethi kusetyenziswe iiveki ezimbalwa ukujonga ukuba iimpawu zihambelana nalo msebenzi wedwa unako umgqirha okanye umboneleli wezempilo unokuqiniseka ukuba imeko yempilo yengqondo iyinyani. Nokuba ngaba imeko yodwa, UDkt Dunckley Uthi uya kubenzela kakubi ngokusetyenziswa kakubi kwe-intanethi.
Umlutha we-intanethi yingxaki. Ihambelana nokunyuka ukwahlukana kwezentlalo kunye nokuxhalaba kwentlalo. Ukudandatheka kunye nokuzondwa kukugqithisileyo kwi-intanethi kwizinto eziselula.
Iveki yeVeki yeThathu
UVictoria Dunckley ubalaseleyo incwadi, “Cwangcisa kwakhona ubunjani bomntwana wakho-isiCwangciso seeveki ezi-4 zokuPhelisa iMeltdowns, Ukuphakamisa amaBakala kunye nokuKhulisa iZakhono zasekuHlaleni ngokuguqula Iziphumo zeXesha leSikrini seKhompyuter.”Isicwangciso esivavanyiweyo nesinokuvavanywa ngabazali ukuba basisebenzise ukunceda abantwana babo ukuba bangafundi imikhwa yabo ye-intanethi. Nangona engadibani ngqo nomlutha we-intanethi, isiseko sobungqina siyafana. Inkqubo ithatha iiveki ezintathu, kunye nokudinga enye iveki yokulungiselela ukuqinisekisa ukuba ihamba kakuhle.
Izilutha ze-intanethi ziquka ukugembula, ukudlala kwevidiyo, imidiya yoluntu, iinkonzo zokuthandana, ukuthenga kunye neentlekisa.
Ukuxhatshazwa koonobumba be-intanethi kungabangela ukonakalisa ukwedlula umdlalo okanye ukuxhatshazwa kweendaba zoluntu njengokuba kunokutshabalalisa umnqweno wesini wesondo kunye nothando kubantu bokwenene.
2015 uphando kwi-Neuroscience ye-Intanethi ye-I-Pornography: Ukuhlaziywa kunye nokuhlaziywa kukhokelela ekugqibeleni ukuba "ukugqithisa i-intanethi ye-intanethi kuhambelana nesakhelo somlutha kwaye ikwabelana ngeendlela ezifanayo ezisisiseko kunye nokulutha kweziyobisi."
Iimpawu zokusetyenziswa ngokugqithiseleyo koononophelo zivame ukulinganisa ezinye zeengxaki. Ukwahlukana kweemeko zangempela kwizinto eziphathekayo zoononophelo, into ekhethekileyo kukuba uqale ngokukhawuleza. Emva kokuba ingqondo ingasayi kuvuselelwa, inethuba lokubuyisela uvelwano lwendalo.
Kule vidiyo ibhlogger "Into endiyifundileyo" ibonelela ngotyelelo oluphandwe kakuhle lweendlela ezithile zobuchopho ezenza i-intanethi (kunye nezinto kunye nokuziphatha) ukuba likhoboka. Injongo yabo kukunceda ababukeli baqonde ukuba i-Intanethi iyichaphazela njani ingqondo yakho ukuze ungaqali ulawulwa yiyo (17.01).